मरेको कुखुराको मासु खाँदा १ जनाको मृत्यु, ९ जना गम्भीर बिरामी
बैतडी, ३ मंसिर । पुर्चौंडी नगरपालिका-२ जरसौंमा मरेको कुखुराको मासु खाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
शनिबार मरेको कुखुराको मासु खाएर बिरामी परेकी १५ वर्षीया पुष्पा कार्कीको मंगलबार ज्यान गएको हो । मरेको कुखुराको मासु खाएपछि पुष्षा गम्भीर विरामी भएकी थिइन् ।
त्यस्तै मरेको कुखुराको मासु खाएर ९ जना गम्भीर बिरामी परेका छन् ।
बिरामी हुनेमा ७० वर्षीय पार्वती पार्की, ३३ वर्षीया गंगा पार्की, ८ वर्षीय राकेश पार्की, ३५ वर्षीय जानकी पार्की, १२ वर्षीय मनोज पार्की, १० वर्षीय रमेश पार्की, ६ वर्षीय भुवन पार्की, ६ वर्षीय रुपेश पार्की र ४ वर्षीय सपना पार्की रहेका छन् । ७० वर्षीय पार्वतीबाहेक सबैलाई उपचारका लागि हाट स्वास्थ्यचौकी लगिएको छ ।
शनिबार साँझ मरेको कुखुराको मासु घरपरिवारका सबै सदस्यले खाएका थिए। आइतबारदेखि परिवारका १० जना बिरामी परेको स्थानीय केशव पन्तले जानकारी दिए । बिरामी परेकी मध्ये १५ वर्षीया पुष्पा पार्कीको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको उनले बताए।
मासु खाएपछि बिरामी भएकामा बान्ता हुने, झाडापाखलालगायतका लक्षण देखिएका पन्तले बताए । बिरामीलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले औषधि दिएपनि ठीक नभएपछि थप उपचारका लागि हाट स्वास्थ्यचौकीमा लगेको पन्तले बताए ।
महादेवस्थान स्वास्थ्यचौकीका अहेव राधिका कुँवरका अनुसार बिरामीलाई घरमै गएर औषधि दिँदा पनि बचाउन नसकिएको हो ।
बाढी पहिराे प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था खै ?
सोती घटनाको प्रतिवेदन सभामुख सापकाेटाकाे टेवलमा, यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेकपाको आन्तरिक किचलोमा कुर्ची जोगाउने अस्त्र होः गगन थापा
अर्थ / व्यापार, मुख्य समाचार, विश्व
अमेरिकी बजेट घाटा उच्च बिन्दुमा, २७ खर्ब व्यापार घाटा
ओलीको अभिव्यक्तिका बारेमा परराष्ट्रले मुख खोल्यो
मंगलबार थपिए धनुषामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित, अन्य कुन जिल्लाका कति ?
सुरुङमा छाडिएकाे पानीले बगाउँदा २ जना बेपत्ता
सिन्धुपाल्चाेक ३० असार । सिन्धुपाल्चाेकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयाेजनाकाे सुरुङमा छाडिएकाे पानीले बगाउँदा २ जना बेपत्ता...
सकियो ओली–प्रचण्ड छलफल
काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...